သန္ဓေသားလောင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အဆင့်ဆင့် | Myanmaronlive
เขียนบน มิถุนายน 12, 2019 โดย monchankar007
၁။ ပထမ ၃ လ ဆိုတာ သန္ဓေစတည်ချိန်ကနေ နောက် ၁၂ ပါတ်အထိ။
၂။ ဒုတိယ ၃ လ ဆိုတာ ၁၃ ပါတ်ကနေ ၂၇ ပါတ်အထိ။
၃။ တတိယ ၃ လ ဆိုတာ ၂၈ ပါတ်ကနေ မွေးတဲ့အထိ။
၁-၁၂ ပါတ် ကိုယ်ဝန် မိခင်လောင်းမှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲလာသလဲ။ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာ စနစ်တိုင်းလိုလိုမှာ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်လာစေတယ်။လစဉ်ရာသီ မလာတော့ဘူး။ စိတ်ပိုင်းရော ရုပ်ပိုင်းမှာပါ ပြောင်းလာတယ်။မောပန်းလွယ်မယ်။ ရင်သား နာတယ်။ ပိုကြီးထွားလာမယ်။ နို့သီးထိပ်ဖျားလဲ သိသိသာသာ ဖြစ်လာမယ်။ အစာမကျေသလို ဖြစ်လာမယ်။ ပျို့ချင်- အန်ချင် ဖြစ်မယ်။Morning sickness ခေါ်ကြတယ်။ အစားအစာ တစ်မျိုးမျိုးကို တပ်မက်မှု ချဉ်ခြင်းတပ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်မူ ပြောင်းလာနိုင်တယ်။ ဝမ်းချုပ်တတ်တယ်။ ဆီးခဏခဏသွားချင်မယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်။ ရင်ပူမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာမယ်။ အန်တာ၊ အစာမစားချင်တာများရင် အလေးချိန်ကျနိုင်တယ်။ စားချိန်၊ အိပ်ချိန်တွေ ပြောင်းလာတတ်တယ်။ အစားကို နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏ စားချင်လာမယ်။ ကိုယ်ဝန်ရင့်လာတာနဲ့ ဒီလိုခံစားနေရတာတွေ ကောင်းလာမယ်။ တချို့မှာတော့ တောက်လျှောက် နေမကောင်း ဖြစ်နေတတ်တယ်။
ကလေးဦးနှောက်နဲ့ ခါးရိုးမကြီးထဲက အာရုံကြောကြီး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ နှလုံးလည်း စတင်ဖြစ်လာပြီ။ ခြေ-လက်ဖြစ်လာမဲ့ အရာလည်း ပေါ်လာပြီ။ သန္ဓေသားဟာ တစ်လက်မရဲ့ ၂၅ ပုံ ၁ ပုံ အရှည်ရှိလာပြီ။ရက်သတ္တ(၈) ပါတ် သန္ဓေသား အဓိကအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ ကိုယ်ရယ်-ခေါင်းရယ် ရှိလာပြီ။ နှလုံးခုန်တာ စည်းချက်ကျကျ ကြားရပြီ။ ခြေတွေ-လက်တွေ ရှည်လာပြီ။ လက်ချောင်းလေးတွေ ပီပြင်လာပြီ။ယောက်ျားလေး-မိန်းကလေး ခွဲခြားဖြစ်လာပြီ။ မျက်လုံးက မျက်နှာရှေ့ထွက်ပြူလာပြီး၊ မျက်ရစ်ပေါ်လာပြီ။ ချက်ကျိုးကိုကောင်းကောင်းမြင်လာရပြီ။ ရက်သတ္တ (၈) ပါတ်အကုန်မှာ သန္ဓေသားက ကလေးငယ်လေး၊ လူသားလေးလို ပီပြင်လာပြီ။တစ်လက်မအထိ ရှည်လာပြီ။ အလေးချိန် တအောင်စရဲ့ ၈ပုံ ၁ ပုံ ရှိလာပြီ။ (၁အောင်စ= ၂၈. ၃ ဂရမ်)
ရက်သတ္တ(၁၂) ပါတ် သန္ဓေသား
အာရုံကြောတွေနဲ့ ကြွက်သားတွေ တွဲလုပ်နိုင်လာပြီ။ လက်သီးဆုပ်တတ်လာပြီ။ အပြင်ပန်းအရ ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါ၊ မိန်းမလိင်အင်္ဂါတွေ မြင်လာနိုင်ပြီ။ ပထမ ၃ လနောက်မှာ (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်ရင် မွေးမဲ့ကလေးရဲ့ လိင်အင်္ဂါကို သိနိုင်ပြီ။ မျက်ခွံတွေ ကြီးထွားလာနေတဲ့ မျက်လုံးကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ပိတ်ထားမယ်။ ၂၈ ပါတ်ထိ မဖွင့်ဘူး။ ဦးခေါင်း ဖွံ့ထွားနေတာ နှေးလိုက်ပြီ။ ကိုယ်ပိုင်းက ပိုကြီးထွားလာမယ်။ ၃ လက်မအထိ ရှည်လာပြီ။ တစ်အောင်စအထိ လေးလံလာပြီ။
ရက်သတ္တ(၁၃-၂၈) ပါတ် သန္ဓေသားကိုယ်ဝန် ဒုတိယ (၃) လ
များသောအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဒုတိယပါတ်ဟာ ပထမပါတ်ထက် နေရထိုင်ရ သက်သာကောင်းမွန်ကြတယ်။ ပျို့ချင်၊ အန်ချင်တာတွေ အားကုန်တာတွေ ပျောက်သွားပြီ။ အသစ်အပြောင်းအလဲတွေတော့ ရှိလာမယ်။ ဗိုက်ဖောင်းလာတာက ပိုသိသာလာမယ်။ အထဲက ကလေးလှုပ်တာ သိလာမယ်။ ကလေးက ခြေနဲ့ကန်တာလဲ သတိထားမိမယ်။
ရက်သတ္တ(၁၆) ပါတ် သန္ဓေသား
ညောင်းတာ၊ ကိုက်တာ၊ ခါးနာတာ ဖြစ်လာမယ်။ ပေါင်- ခြေသလုံးတွေ နာနိုင်တယ်။ ဗိုက်၊ ပေါင်၊ ရင်သား၊ တင်ပါးတွေမှာ အကြောပြတ်တဲ့ အရာတွေ ထင်လာမယ်။ ရင်သားထိပ်က အရောင်ပိုမဲလာမယ်။ ချက်ကနေ အောက်တည့်တည့်တန်းနေတဲ့ ခပ်မဲမဲ မျဉ်းကြောင်းထင်လာမယ်။ ပါး၊ နှာခေါင်း၊ အပေါ်နှုတ်ခမ်း၊ နဖူး စတဲ့နေရာမှာ အရောင်ရင့်တဲ့ အစက်အပျောက်တွေ ပေါ်လာနိုင်တယ်။ မျက်နှာ ဘယ်ဘက်နဲ့ ညာဘက် ခပ်ဆင်ဆင်တူတူဖြစ်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ လက်တွေမှာ ထုံကျင်ကျင် ဖြစ်လာတာကို Carpal tunnel syndrome (ကာပယ်လ်-တာနယ်လ်-ဆင်ဒရုမ်း) ခေါ်တယ်။ ဗိုက်၊ လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါးတွေ ယားနိုင်တယ်။ တကယ်လို့ ပျို့-အန်တာ၊ အသား-ဆီးဝါတာ၊ အစားပျက်တာ၊ အားကုန်တာတွေနဲ့ ယားတာ တွဲဖြစ်ရင်တော့ ဆရာဝန်ပြပါ။ အသည်းကို စစ်ဆေးဖို့ လိုမယ်။ ခြေသလုံး၊ လက်၊ မျက်နှာတွေ ရောင်နိုင်တယ်။ တကယ်လို့ ရောင်တာက များတယ်။ ဆီးအနည်ပါနေမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတာ များနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ကြွက်သားတွေ၊ အရိုးတွေ ပိုဖြစ်ပေါ်လာကြပြီ။ အရိုးစနစ်က ပိုပြည့်စုံလာပြီ။ အရေပြားလည်း ဖြစ်လာပြီး ပါးလွန်းလို့ ဒိုးယိုပေါက်မြင်ရသလောက်ဘဲ။ Meconium ငယ်ချီးဆိုတာ ဖြစ်လာပြီ။ အူတွေက စလှုပ်ရှားလာနေပြီ။ ပါးစပ်က စုပ်တဲ့ တုံ့ပြန်မှု စလုပ်နိုင်လာပြီ။ အရှည် ၄-၅ လက်မနဲ့ အလေးချိန် ၃ အောင်စ ရှိလာပြီ။
ရက်သတ္တ (၂၀) ပတ် သန္ဓေသား
ပိုလှုပ်ရှားတတ်လာပြီ။ Lanugo ခေါ်တဲ့ ကိုယ်မွှေးနုလေးတွေက တစ်ကိုယ်လုံးဖုံးနေပြီ။ Vernix ခေါ်တဲ့ ဖယောင်းလို အရာလည်း ရှိလာပြီ။ မျက်ခုံးမွှေး၊ မျက်တောင်မွှေး၊ လက်သည်း-ခြေသည်းတွေ ဖြစ်လာပြီ။ အကြားအာရုံ ရှိလာပြီ။ မျိုချတတ်လာပြီ။ ၆ လက်မရှည်ပြီး ၉ အောင်စ လေးလာပြီ။
ရက်သတ္တ (၂၄) ပါတ် သန္ဓေသား
Bone marrow ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ဖြစ်လာလို့ သွေးဥတွေ ထုတ်လုပ်လာပြီ။ Taste buds လျှာမှာ အရသာခံနိုင်တဲ့ အဖုလေးတွေ ဖြစ်လာပြီ။ လက်ဗွေ၊ ခြေဗွေတွေ ဖြစ်လာပြီ။ ခေါင်းမှာ တကယ့်ဆံပင် ဖြစ်လာပြီ။ အဆုတ်တွေ ဖြစ်လာပြီ။ အလုပ်တော့ မလုပ်သေးဘူး။ Startle reflex ခေါ်တဲ့ ရုတ်တရက်တစ်ခုခုကနေ ထိခိုက်စေသလိုမျိုး သက်ရောက်မှု ရှိတာကို အလိုလို တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းဆိုတာ ရှိလာပြီ။ ဥပမာ- မျက်စိကို ကာကွယ်ဖို့ မျက်တောင်ပိတ်ပစ်တာမျိုး။ လက်တွေကလည်း အဲလိုသဘောလုပ်တတ်လာပြီ။ ဦးနှောက် အောက်ခြေကနေ လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ အိပ်တတ်၊ နိုးတတ်လာပြီ။ ယောကျာ်လေးဆိုရင် ဗိုက်ထဲမှာ စဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျားအစိဟာ ကပ်ပဲ့အိတ်ထဲ ဆင်းလာပြီ။
မိန်းကလေးဆိုရင် သားအိမ်၊ မျိုးဥအိမ်တွေ နေသားတကျ ဖြစ်လာပြီ။ အရပ်က ၁၂ လက်မရှည်ပြီ။ အဆီကို စုဆောင်းတတ်လာလို့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာမယ်။ ၁ ပေါင်ခွဲ လေးလာပြီ။
တတိယ(၃)လပိုင်း ရက်သတ္တ(၂၉-၄၀) ပါတ်
အသက်ရှူရတာ နည်းနည်းခက်လာမယ်။ ကိုယ်လက်သန့်ရှင်းဖို့ ခဏခဏ သွားရမယ်။ ကြီးထွားလာတဲ့ကလေးက ဆီးအိမ်နဲ့ အစာဟောင်းအိမ်တွေကို ဖိလာလို့ ဖြစ်ရတယ်။ စိတ်ပိုင်းခံစားရတာ ပြောင်းလာမယ်။ ကလေးအတွက် စိုးရိမ်တာရော ဝမ်းမြောက်တာပါ စိတ်ထဲမှာ လွှမ်းမိုးလာမယ်။ရင်ပူမယ်။ခြေ-လက်-မျက်နှာ ပိုရောင်လာတတ်တယ်။ လိပ်ခေါင်းရှိလာမယ်။ ရင်သားက တင်း-နာမယ်။ ညှစ်ကြည့်ရင် Pre-milk နို့ဦးရည်ကြည်ခေါ်တဲ့ Colostrums ထွက်မယ်။ချက်ကစူလာမယ်။ အိပ်ရတာ ခက်လာမယ်။ သားအိမ်ဝက ပြောင်းလာမယ်။ ပိုပါးပြီး ပျော့လာမယ်။ Effacing ခေါ်တယ်။
ကိုယ်ဝန် ၃၂ ပါတ်
ကလေးအရိုးတွေအားလုံး ဖြစ်မြောက်လာပြီ။ ပျော့နေသေးတယ်။ခြေကန်တာ သန်လာပြီ။ အလင်းရောင်ရရင် မျက်စိမှိတ် တတ်-ဖွင့်တတ်ပြီ။ အရေးပါတဲ့ (ကယ်လ်စီယမ်) နဲ့ သံဓာတ်တွေကို လှောင်ထားနိုင်လာပြီ။ အရင်ကရှိနေခဲ့တဲ့ Lanugo အရေပြားနုလေးတွေနေရာ တကယ့်အရေပြား အစားထိုးလာပြီ။ အလေးချိန်က တိုးသထက်တိုးလာတယ်။ ၇ ရက်တပတ်မှာ ၈ အောင်စနှုန်း တိုးလာမယ်။ အခုဆိုရင် ၁၅- ၁၇ လက်မအရပ်ရှိပြီ။ ၄ ပေါင်၊၄ ပေါင်ခွဲ လေးလာပြီ။
ကိုယ်ဝန် ၃၆ ပါတ်
အပေါ်ဖုံး Vernix ဖယောင်းလွှာ ပိုထူလာမယ်။ အဆီပိုများမယ်။ သားအိမ်ထဲမှာ သူကပိုကြီးလာလို့ အရင်ကလောက် လှုပ်ရှားမရဖြစ်လာတယ်။ ၁၆-၁၉ လက်မနဲ့ ၆-၆.၅ ပေါင်ရှိလာပြီ။
၃၇ ပါတ်ပြည့်ရင် လစေ့ပြီလို့ ပြောနိုင်တယ်။ အများဆုံးကိုယ်ဝန်တွေမှာ ကလေးခေါင်းက အောက်ဖက်မှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိလာပြီ။
Credit: Dr. တင့်ဆွေ, Healthcare Journal
၁။ ပထမ ၃ လ ဆိုတာ သန်ဓစေတညျခြိနျကနေ နောကျ ၁၂ ပါတျအထိ။
၂။ ဒုတိယ ၃ လ ဆိုတာ ၁၃ ပါတျကနေ ၂၇ ပါတျအထိ။
၃။ တတိယ ၃ လ ဆိုတာ ၂၈ ပါတျကနေ မှေးတဲ့အထိ။
၁-၁၂ ပါတျ ကိုယျဝနျ မိခငျလောငျးမှာ ဘာတှေ ပွောငျးလဲလာသလဲ။ဟျောမုနျး အပွောငျးအလဲတှကွေောငျ့ ကိုယျခန်ဓာ စနဈတိုငျးလိုလိုမှာ အပွောငျးအလဲတှေ အမြားကွီး ဖွဈလာစတေယျ။လစဉျရာသီ မလာတော့ဘူး။ စိတျပိုငျးရော ရုပျပိုငျးမှာပါ ပွောငျးလာတယျ။မောပနျးလှယျမယျ။ ရငျသား နာတယျ။ ပိုကွီးထှားလာမယျ။ နို့သီးထိပျဖြားလဲ သိသိသာသာ ဖွဈလာမယျ။ အစာမကသြေလို ဖွဈလာမယျ။ ပြို့ခငျြ- အနျခငျြ ဖွဈမယျ။Morning sickness ချေါကွတယျ။ အစားအစာ တဈမြိုးမြိုးကို တပျမကျမှု ခဉျြခွငျးတပျတာ ဖွဈနိုငျတယျ။ စိတျမူ ပွောငျးလာနိုငျတယျ။ ဝမျးခြုပျတတျတယျ။ ဆီးခဏခဏသှားခငျြမယျ။ ခေါငျးကိုကျမယျ။ ရငျပူမယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျ တိုးလာမယျ။ အနျတာ၊ အစာမစားခငျြတာမြားရငျ အလေးခြိနျကနြိုငျတယျ။ စားခြိနျ၊ အိပျခြိနျတှေ ပွောငျးလာတတျတယျ။ အစားကို နညျးနညျးနဲ့ ခဏခဏ စားခငျြလာမယျ။ ကိုယျဝနျရငျ့လာတာနဲ့ ဒီလိုခံစားနရေတာတှေ ကောငျးလာမယျ။ တခြို့မှာတော့ တောကျလြှောကျ နမေကောငျး ဖွဈနတေတျတယျ။
ကလေးဦးနှောကျနဲ့ ခါးရိုးမကွီးထဲက အာရုံကွောကွီး စတငျဖွဈပျေါလာပွီ။ နှလုံးလညျး စတငျဖွဈလာပွီ။ ခွေ-လကျဖွဈလာမဲ့ အရာလညျး ပျေါလာပွီ။ သန်ဓသေားဟာ တဈလကျမရဲ့ ၂၅ ပုံ ၁ ပုံ အရှညျရှိလာပွီ။ရကျသတ်တ(၈) ပါတျ သန်ဓသေား အဓိကအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတှေ ဖွဈပျေါလာပွီ။ ကိုယျရယျ-ခေါငျးရယျ ရှိလာပွီ။ နှလုံးခုနျတာ စညျးခကျြကကြ ကွားရပွီ။ ခွတှေေ-လကျတှေ ရှညျလာပွီ။ လကျခြောငျးလေးတှေ ပီပွငျလာပွီ။ယောကျြားလေး-မိနျးကလေး ခှဲခွားဖွဈလာပွီ။ မကျြလုံးက မကျြနှာရှထှေ့ကျပွူလာပွီး၊ မကျြရဈပျေါလာပွီ။ ခကျြကြိုးကိုကောငျးကောငျးမွငျလာရပွီ။ ရကျသတ်တ (၈) ပါတျအကုနျမှာ သန်ဓသေားက ကလေးငယျလေး၊ လူသားလေးလို ပီပွငျလာပွီ။တဈလကျမအထိ ရှညျလာပွီ။ အလေးခြိနျ တအောငျစရဲ့ ၈ပုံ ၁ ပုံ ရှိလာပွီ။ (၁အောငျစ= ၂၈. ၃ ဂရမျ)
ရကျသတ်တ(၁၂) ပါတျ သန်ဓသေား
အာရုံကွောတှနေဲ့ ကွှကျသားတှေ တှဲလုပျနိုငျလာပွီ။ လကျသီးဆုပျတတျလာပွီ။ အပွငျပနျးအရ ယောကျြားလိငျအင်ျဂါ၊ မိနျးမလိငျအင်ျဂါတှေ မွငျလာနိုငျပွီ။ ပထမ ၃ လနောကျမှာ (အာလျထှာဆောငျး) ရိုကျရငျ မှေးမဲ့ကလေးရဲ့ လိငျအင်ျဂါကို သိနိုငျပွီ။ မကျြခှံတှေ ကွီးထှားလာနတေဲ့ မကျြလုံးကို ကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ ပိတျထားမယျ။ ၂၈ ပါတျထိ မဖှငျ့ဘူး။ ဦးခေါငျး ဖှံ့ထှားနတော နှေးလိုကျပွီ။ ကိုယျပိုငျးက ပိုကွီးထှားလာမယျ။ ၃ လကျမအထိ ရှညျလာပွီ။ တဈအောငျစအထိ လေးလံလာပွီ။
ရကျသတ်တ(၁၃-၂၈) ပါတျ သန်ဓသေားကိုယျဝနျ ဒုတိယ (၃) လ
မြားသောအားဖွငျ့ ကိုယျဝနျဒုတိယပါတျဟာ ပထမပါတျထကျ နရေထိုငျရ သကျသာကောငျးမှနျကွတယျ။ ပြို့ခငျြ၊ အနျခငျြတာတှေ အားကုနျတာတှေ ပြောကျသှားပွီ။ အသဈအပွောငျးအလဲတှတေော့ ရှိလာမယျ။ ဗိုကျဖောငျးလာတာက ပိုသိသာလာမယျ။ အထဲက ကလေးလှုပျတာ သိလာမယျ။ ကလေးက ခွနေဲ့ကနျတာလဲ သတိထားမိမယျ။
ရကျသတ်တ(၁၆) ပါတျ သန်ဓသေား
ညောငျးတာ၊ ကိုကျတာ၊ ခါးနာတာ ဖွဈလာမယျ။ ပေါငျ- ခွသေလုံးတှေ နာနိုငျတယျ။ ဗိုကျ၊ ပေါငျ၊ ရငျသား၊ တငျပါးတှမှော အကွောပွတျတဲ့ အရာတှေ ထငျလာမယျ။ ရငျသားထိပျက အရောငျပိုမဲလာမယျ။ ခကျြကနေ အောကျတညျ့တညျ့တနျးနတေဲ့ ခပျမဲမဲ မဉျြးကွောငျးထငျလာမယျ။ ပါး၊ နှာခေါငျး၊ အပျေါနှုတျခမျး၊ နဖူး စတဲ့နရောမှာ အရောငျရငျ့တဲ့ အစကျအပြောကျတှေ ပျေါလာနိုငျတယျ။ မကျြနှာ ဘယျဘကျနဲ့ ညာဘကျ ခပျဆငျဆငျတူတူဖွဈလို့ ကိုယျဝနျဆောငျမကျြနှာဖုံးလို့ ချေါကွတယျ။ လကျတှမှော ထုံကငျြကငျြ ဖွဈလာတာကို Carpal tunnel syndrome (ကာပယျလျ-တာနယျလျ-ဆငျဒရုမျး) ချေါတယျ။ ဗိုကျ၊ လကျဖဝါး၊ ခွဖေဝါးတှေ ယားနိုငျတယျ။ တကယျလို့ ပြို့-အနျတာ၊ အသား-ဆီးဝါတာ၊ အစားပကျြတာ၊ အားကုနျတာတှနေဲ့ ယားတာ တှဲဖွဈရငျတော့ ဆရာဝနျပွပါ။ အသညျးကို စဈဆေးဖို့ လိုမယျ။ ခွသေလုံး၊ လကျ၊ မကျြနှာတှေ ရောငျနိုငျတယျ။ တကယျလို့ ရောငျတာက မြားတယျ။ ဆီးအနညျပါနမေယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျတိုးတာ မြားနမေယျဆိုရငျ ဆရာဝနျပွပါ။
ကွှကျသားတှေ၊ အရိုးတှေ ပိုဖွဈပျေါလာကွပွီ။ အရိုးစနဈက ပိုပွညျ့စုံလာပွီ။ အရပွေားလညျး ဖွဈလာပွီး ပါးလှနျးလို့ ဒိုးယိုပေါကျမွငျရသလောကျဘဲ။ Meconium ငယျခြီးဆိုတာ ဖွဈလာပွီ။ အူတှကေ စလှုပျရှားလာနပွေီ။ ပါးစပျက စုပျတဲ့ တုံ့ပွနျမှု စလုပျနိုငျလာပွီ။ အရှညျ ၄-၅ လကျမနဲ့ အလေးခြိနျ ၃ အောငျစ ရှိလာပွီ။
ရကျသတ်တ (၂၀) ပတျ သန်ဓသေား
ပိုလှုပျရှားတတျလာပွီ။ Lanugo ချေါတဲ့ ကိုယျမှေးနုလေးတှကေ တဈကိုယျလုံးဖုံးနပွေီ။ Vernix ချေါတဲ့ ဖယောငျးလို အရာလညျး ရှိလာပွီ။ မကျြခုံးမှေး၊ မကျြတောငျမှေး၊ လကျသညျး-ခွသေညျးတှေ ဖွဈလာပွီ။ အကွားအာရုံ ရှိလာပွီ။ မြိုခတြတျလာပွီ။ ၆ လကျမရှညျပွီး ၉ အောငျစ လေးလာပွီ။
ရကျသတ်တ (၂၄) ပါတျ သန်ဓသေား
Bone marrow ရိုးတှငျးခွငျဆီ ဖွဈလာလို့ သှေးဥတှေ ထုတျလုပျလာပွီ။ Taste buds လြှာမှာ အရသာခံနိုငျတဲ့ အဖုလေးတှေ ဖွဈလာပွီ။ လကျဗှေ၊ ခွဗှေတှေေ ဖွဈလာပွီ။ ခေါငျးမှာ တကယျ့ဆံပငျ ဖွဈလာပွီ။ အဆုတျတှေ ဖွဈလာပွီ။ အလုပျတော့ မလုပျသေးဘူး။ Startle reflex ချေါတဲ့ ရုတျတရကျတဈခုခုကနေ ထိခိုကျစသေလိုမြိုး သကျရောကျမှု ရှိတာကို အလိုလို တုံ့ပွနျနိုငျစှမျးဆိုတာ ရှိလာပွီ။ ဥပမာ- မကျြစိကို ကာကှယျဖို့ မကျြတောငျပိတျပဈတာမြိုး။ လကျတှကေလညျး အဲလိုသဘောလုပျတတျလာပွီ။ ဦးနှောကျ အောကျခွကေနေ လုပျပေးတာဖွဈတယျ။ အိပျတတျ၊ နိုးတတျလာပွီ။ ယောကျြာလေးဆိုရငျ ဗိုကျထဲမှာ စဖွဈခဲ့တဲ့ ကြားအစိဟာ ကပျပဲ့အိတျထဲ ဆငျးလာပွီ။
မိနျးကလေးဆိုရငျ သားအိမျ၊ မြိုးဥအိမျတှေ နသေားတကြ ဖွဈလာပွီ။ အရပျက ၁၂ လကျမရှညျပွီ။ အဆီကို စုဆောငျးတတျလာလို့ ကိုယျအလေးခြိနျတကျလာမယျ။ ၁ ပေါငျခှဲ လေးလာပွီ။
တတိယ(၃)လပိုငျး ရကျသတ်တ(၂၉-၄၀) ပါတျ
အသကျရှူရတာ နညျးနညျးခကျလာမယျ။ ကိုယျလကျသနျ့ရှငျးဖို့ ခဏခဏ သှားရမယျ။ ကွီးထှားလာတဲ့ကလေးက ဆီးအိမျနဲ့ အစာဟောငျးအိမျတှကေို ဖိလာလို့ ဖွဈရတယျ။ စိတျပိုငျးခံစားရတာ ပွောငျးလာမယျ။ ကလေးအတှကျ စိုးရိမျတာရော ဝမျးမွောကျတာပါ စိတျထဲမှာ လှမျးမိုးလာမယျ။ရငျပူမယျ။ခွေ-လကျ-မကျြနှာ ပိုရောငျလာတတျတယျ။ လိပျခေါငျးရှိလာမယျ။ ရငျသားက တငျး-နာမယျ။ ညှဈကွညျ့ရငျ Pre-milk နို့ဦးရညျကွညျချေါတဲ့ Colostrums ထှကျမယျ။ခကျြကစူလာမယျ။ အိပျရတာ ခကျလာမယျ။ သားအိမျဝက ပွောငျးလာမယျ။ ပိုပါးပွီး ပြော့လာမယျ။ Effacing ချေါတယျ။
ကိုယျဝနျ ၃၂ ပါတျ
ကလေးအရိုးတှအေားလုံး ဖွဈမွောကျလာပွီ။ ပြော့နသေေးတယျ။ခွကေနျတာ သနျလာပွီ။ အလငျးရောငျရရငျ မကျြစိမှိတျ တတျ-ဖှငျ့တတျပွီ။ အရေးပါတဲ့ (ကယျလျစီယမျ) နဲ့ သံဓာတျတှကေို လှောငျထားနိုငျလာပွီ။ အရငျကရှိနခေဲ့တဲ့ Lanugo အရပွေားနုလေးတှနေရော တကယျ့အရပွေား အစားထိုးလာပွီ။ အလေးခြိနျက တိုးသထကျတိုးလာတယျ။ ၇ ရကျတပတျမှာ ၈ အောငျစနှုနျး တိုးလာမယျ။ အခုဆိုရငျ ၁၅- ၁၇ လကျမအရပျရှိပွီ။ ၄ ပေါငျ၊၄ ပေါငျခှဲ လေးလာပွီ။
ကိုယျဝနျ ၃၆ ပါတျ
အပျေါဖုံး Vernix ဖယောငျးလှာ ပိုထူလာမယျ။ အဆီပိုမြားမယျ။ သားအိမျထဲမှာ သူကပိုကွီးလာလို့ အရငျကလောကျ လှုပျရှားမရဖွဈလာတယျ။ ၁၆-၁၉ လကျမနဲ့ ၆-၆.၅ ပေါငျရှိလာပွီ။
၃၇ ပါတျပွညျ့ရငျ လစပွေီ့လို့ ပွောနိုငျတယျ။ အမြားဆုံးကိုယျဝနျတှမှော ကလေးခေါငျးက အောကျဖကျမှာ သတျသတျမှတျမှတျရှိလာပွီ။
Credit: Dr. တငျ့ဆှေ, Healthcare Journal